2 Tantara Chapter 20 - Baiboly Malagasy | Madagascar features website
2 Tantara Chapter 20 - Baiboly Malagasy
Baiboly Malagasy » 2 Tantara » Chapter 20
ARY nony afaka izany, dia avy hiady tamin’i Josafata ny taranak’i Moaba sy ny taranak’i Amona mbamin’ny any ankoatry ny Amonita. Apk:3:19
Ary nisy tonga ka nanambara tamin’i Josafata hoe: Indreo, misy olona betsaka avy any an-dafin’ny ranomasina, dia avy any Syria, ho avy hiady aminao; ary indreo izy ao Hazezon-tamara (En-jedy izany). Jos:15:62
Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an’i Jehovah sady niantso andro fifadian-kanina ho an’ny tanin’ny Joda rehetra. 2Tt:11:16
Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin’i Jehovah; eny, avy tamin’ny tanànan’ny Joda rehetra hitady an’i Jehovah izy. Sal:34:6
Ary Josafata nitsangana teo amin’ny fiangonan’ny Joda sy Jerosalema, tao amin’ny tranon’i Jehovah, teo anoloan’ny kianja vaovao, 2Tt:6:12
ka nanao hoe: Ry Jehovah ô, Andriamanitry ny razanay, tsy Hianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, Hianao no manapaka amin’ny fanjakan’ny jentilisa rehetra, ary eo an-tànanao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana Anao. Deo:4:39
Ry Andriamanitray ô, tsy Hianao va no nandroaka ny mponina tamin’ity tany ity hiala teo anoloan’ny Isiraely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an’ny taranak’i Abrahama sakaizanao? Jak:2:23
Ary nonina tatỳ izy ka nanao fitoerana masina teto ho an’ny anaranao sady nanao hoe: 2Tt:6:10
Raha manjo anay ny loza, na sabatra, na famaliana, na areti-mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay (fa ny anaranao no amin’ity trano ity) ka hitaraina aminao amin’ny fahorianay, dia hihaino Hianao ka hamonjy. 1Pj:8:33
Koa indreo ny taranak’i Amona sy Moaba ary ny avy any an-tendrombohitra Seira, dia ilay tsy navelanao hotafihin’ny Isiraely, fony izy nivoaka avy tany amin’ny any Egypta, ka nivily fa tsy nandringana azy; Pts:11:15-18
nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy handroaka anay amin’ny lova nomenao anay. Pts:11:24
Ry Andriamanitray ô, tsy hitsara azy va Hianao? Fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo, izay avy hamely anay, koa tsy hitanay izay hataonay; fa Hianao no andrandrain’ny masonay. Sal:123:2
Ary ny Joda rehetra mbamin’ny vadiny aman-janany koa dia samy nitsangana teo anatrehan’i Jehovah. Deo:29:10
Ary Jahaziela, zanak’i Zakaria, zanak’i Benaia, zanak’i Jeiela, zanak’i Matania, Levita amin’ny taranak’i Asafa, dia voatsindrin’ny Fanahin’i Jehovah teo amin’ny fiangonana 2Tt:15:1
ka nanao hoe: Mihainoa hianareo, ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema, ary hianao, ry Josafata mpanjaka: Izao no lazain’i Jehovah aminareo: Aza matahotra na mivadi-po ny amin’ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady, fa an’Andriamanitra. Eks:14:13
Rahampitso dia midìna hiady aminy hianareo; fa, indreo, hiakatra amin’ny fiakarana Ziza izy; ary hianareo hahita azy eo amin’ny faran’ny lohasahan-driaka tandrifin’ny efitr’i Jeroela.
Tsy hianareo anefa no hiady amin’ity; mijanòna tsara, fa ho hitanareo ny hamonjen’i Jehovah anareo, ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa rahampitso dia mivoaha hiady aminy; fa Jehovah no momba anareo. Eks:14:13
Dia niankohoka tamin’ny tany Josafata; ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema niankohoka teo anatrehan’i Jehovah koa ka nivavaka. Sal:95:6
Dia nitsangana ny Levita, taranaky ny Kehatita sy taranaky ny Koraïta, mba hidera an’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tamin’ny feo mahery indrindra. 2Tt:5:13
Ary nifoha maraina koa izy, dia niainga nankany an-efitr’i Tekoa; ary nony nivoaka izy, dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry Joda, sy hianareo, ry mponina eto Jerosalema: Minoa an’i Jehovah Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra hianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina hianareo. 2Tt:20:15
Ary rehefa niara-nihevitra tamin’ny olona izy, dia nanendry mpihira ho an’i Jehovah hidera amin’ny fihaingoana masina, raha mivoaka eo anoloan’ny olona efa voaomana hiady, ka hanao hoe: Miderà an’i Jehovah, fa mandrakizay ny famindrampony. 2Tt:7:3
Ary raha vao nanomboka nihoby sy nidera ireo, dia nasian’i Jehovah otrika hamely ny taranak’i Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Seïra, izay avy hamely ny Joda, ka dia resy ireo. Eze:38:21
Dia nitsangana ny taranak’i Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Seïra ka namono sy nandringana azy; ary nony voaringany ny mponina tany Seïra, dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. 1Sm:14:20
Ary nony tonga teo amin’ilay fitazanana any an-efitra ny Joda, dia nijery ireo olona betsaka ireo izy, koa, indreo, nisy faty niampatrampatra tamin’ny tany, fa tsy nisy afa-nandositra. Ezr:9:14
Ary avy hamabo azy Josafata sy ny vahoakany, dia nahita harena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy, ka dia namabo mihoatra noho izay zakany ho entina; ary hateloana no nanangonany ny babo, fa be dia be ireny. Eks:12:36
Ary tamin’ny andro fahefatra dia nivory tao amin’ny lohasaha Beraka izy, fa tany no nisaorany an’i Jehovah; koa izany no nanaovany izany tany izany hoe Lohasaha Beraka mandraka andro-any. Apk:19:1-6
Koa dia niverina ny lehilahy rehetra amin’ny Joda sy Jerosalema, ary Josafata nitarika azy hankany Jerosalema indray tamin’ny fifaliana, fa Jehovah nampifaly azy ny amin’ny fahavalony. 1Sm:2:1
Ary tonga tany Jerosalema izy nitondra valiha sy lokanga ary trompetra ka nankao an-tranon’i Jehovah. 1Tt:25:6
Ary ny fahatahorana an’Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina, nony efa reny fa Jehovah no niady tamin’ny fahavalon’ny Isiraely. Jos:5:1
Ary nandry fahizay ny fanjakan’i Josafata; fa nomen’Andriamaniny fiadanana tamin’ny manodidina izy. Jao:14:27
ARY Josafata nanjaka tamin’ny Joda; dimy amby telo-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary dimy amby roa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema, Ary ny anaran-dreniny dia Azoba, zanakavavin’i Sily. 1Pj:22:42
Ary nandeha tamin’ny làlana nalehan’i Asa rainy izy ka tsy niala tamin’izany, fa nanao izay mahitsy eo imason’i Jehovah. 2Tt:16:7-12
Kanefa ny fitoerana avo tsy mba noravana; fa ny olona tsy mbola nampiomana ny fony hitady an’Andriamanitry ny razany. 2Tt:12:14
Ary ny tantaran’i Josafata sisa, na ny voalohany na ny farany, indro, efa voasoratra ao amin’ny tenin’i Jeho, zanak’i Hanany, izay nakambana ao amin’ny bokin’ny mpanjakan’ny Isiraely, izany. 1Pj:16:1
Nefa nony afaka izany, Josafata, mpanjakan’ny Joda, nikambana tamin’i Ahazia, mpanjakan’ny Isiraely, izay nanao ratsy; 1Pj:22:44
ary nikambana taminy hanao sambo hankany Tarsisy izy, ka tao Ezion-gebera no nanaovany azy. 1Pj:9:26
Ary Eliezera, zanak’i Dodavaho, avy any Maresa, naminany ny amin’i Josafata hoe: Noho ny nikambananao tamin’i Ahazia dia horavan’i Jehovah ny asanao. Ary nahavakiana ny sambo ka tsy nahazo nankany Tarsisy. 2Tt:9:21
«2 Tantara Chapter 19
2 Tantara Chapter 21»